Xisbiga UPD oo kudhawaaqay hogaamiyayaasha Xisbiga+ Sawirro | Wardoon
Home Somali News Xisbiga UPD oo kudhawaaqay hogaamiyayaasha Xisbiga+ Sawirro
Xisbiga UPD oo kudhawaaqay hogaamiyayaasha Xisbiga+ Sawirro
Xisbiga UPD ee uu hoggaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh ayaa maanta magacaabay qaar ka mid ah xubnaha hoggaanka xisbiga. Xisbiga oo mudd 6 bil oo KMG ah guddoomiye u doortay Xasan Sheekh, ayaa maanta magacaabay xubnaha kale ee hoggaanka xisbiga.
Arrintan ayaa waxaa qoraal uu facebook soo dhigay ku faah-faahiyey xildhibaan Axmed Macallin Fiqi oo ka mid ah aas-aasayaasha xisbiga.
Qoraalka xildhibaan Axmed Macallin Fiqi:
Munaasabadda Daahfurka Xarunta dhexe ee xisbiga qaran ee Midowga Nabadda & Horumarka (UPD Party) ayaa galabtay ka dhacday xarunta cusub ee xisbiga, magaalada Muqdisho.
Xildhibaanno labada aqal ee Barlamaanka federaalka, mas’uuliyiin xisbiyada dalka ka jira ka kala socota, xildhibaanno barlamaanada dawlad goboleedyada, iyo xubnaha qeybaha kala duwan ee xisbiga ayaa goobta ku sugnaa, waxaana xarig-jarka ka dib la jeediyey khudbado taabanayey himilada iyo xaaladda siyaasadeed ee dalku waqtigaan marayo.
Waxaa goobta looga dhawaaqay maamulka kumeelgaarka ee xisbigu yeelanayo mudada soo socota, oo ay ka mid yihiin afar guddoomiye ku xigeen oo loo kala magacaabay:
1. Xil. Dr. C.fataax Ismaaciil Daahir – Guddoomiye ku xigeenka arrimaha siyaasadda iyo istaratejiyadda.
2. Senator Xuseen Sheekh Maxamuud – Guddoomiye ku xigeenka arrimaha xubnaha, bulshada iyo wacyigalinta.
3. Xil. Sacdiyo Salaad Samatar – Guddoomiye ku xigeenka arrimaha Qorshaynta iyo horumarinta xisbiga.
4. Senator C/hi Sheekh Ismaaciil Fartaag – Guddoomiye ku xigeenka arrimaha Dowlad Goboleedyada.Iyo
5. xubno kale oo golaha fulinta qaarkood.
Waxaa la joogaa waqtigii ay caddaan lahaeyd jihada caafimaadka qabta ee siyaasadda dalka loo wado, wadada kaliya ee furanna waa nidaamka xisbiyada iyo hanaanka dimuqraadiga ah, mana dhici karto in dalku noqdo mid la mid ah kubadda gacanta ee qofku kaligiis la ordo illaa meesha tabari geysaba, dalka mustaqbalkiisa siyaasadeed waa mid ka wada dhexeeya dadka Soomaaliyeed oo ay horkacayaan xisbiyadoodu.
Xisbi Siyaasadeed marka la maqlo waxaa soo xirmaya albaabka nidaamkii qabiilka siyaasadaysan iyo kali-talisnimada, waana maskax duug ah iyo afkaar fuunto kuwa dhiiragalinaya ama ku fakaraya in caburis, caga-juglayn iyo laaluush in dalka lagu haysan karo.
Xisbiga UPD asagoo dhaqangalinaya himiladiisa Isla markaana cuskanaya dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka u yaallaa, wuxuu ka hawlgali doonaa dalka oo dhan, wuaxaana si weyn hawlihiisa looga dareemi doonaa waqtiyada dhow caasimadda dalka insta Allaah.
UPD albaabadiisu waa furan yihiin dhammaan inta danaynaysa in ay xubno ka noqdaan.
Previous articleSomaliland oo soo bandhigtay ciidan ka soo goostay Puntland + COD
Next articleGaroowe: 6 Musharax oo tanaasushay
DAAWO:-Dr Cabdulaahi Xaashi Abiib oo ujawabay Cabdi Ismaaciil Samatar